Maamulka Jubaland oo digniin u diray dadka daawooyinka ka ganacsada. – The Voice of Northeastern Kenya
Maamulka Jubaland oo digniin u diray dadka daawooyinka ka ganacsada.
Star FM November 23, 2018
Maamulka Jubbaland ayaa digniin u diray Ganacsatada iyo dhaqaatiirka ka howlgasha deeganada maamulkaas ee iibinaya daawooyinka aan la hubin tayadooda oo ay ka dhalan karto dhibaato dhanka caafimaadka ah.
kulankii Golaha Wasiirada ee maamulka Jubbaland ay shalay ku yeesheen magaalada Kismaanyo ayaa lagu soo hadal qaaday dhibaatooyinka ka dhasha dawooyinka aysan tayadooda wanaagsanayn ee laga Ganacsado sidoo kalena ay dhaqaatiirtu dadka siiyaan iyo cunooyin kale oo qaarna xiligoodu dhacay kuwo kalena aysan tayadoodu gaarsiisnayn heerkii loogu tala galay.
Wasiirka Warfaafinta maamulka Jubbaland Eng Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa sheegay in Ganacsatada qaarkood ay keenan deegaanada maamulka Jubaland Dawooyin dhacay loona baahan yahay in laga hortago arintaasi.
Waxa uu sidoo kale Tilmaamay inaan marnaba la ogolaan doonin in dadka laga iibiyo dawooyin aan la hubin tayadooda iyo raashinka sidoo kale.
← DHAGEYSO: Gudiga Dastuurka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay howlaha dib u eegista Dastuurka.
DHAGEYSO:warka Duhurnimo ee idaacda star fm 1:30 PM →